Ajuju banyere ichi ndi nwanyi na ndi nwoke na nwanyi na uka nke Jisos Kraist nke ndi nso ikpeazu - WRSP
Ajuju banyere ichi ndi nwanyi na ndi nwoke na nwanyi na uka nke Jisos Kraist nke ndi nso ikpeazu
Ngwongwo LDS na ihe dị iche iche na-emetụta ụmụ nwanyị
1805 (Disemba 23): A mụrụ Joseph Smith na Sharon, Vermont nye Lucy Mack Smith na Joseph Smith Sr.
1816–1817: Ezi na ụlọ Smith nwụrụ na Palmyra, New York.
1820 ma ọ bụ 1822: Joseph Smith hụrụ ọhụụ mbụ ya.
1825: Joseph Smith zutere Emma Hale na Harmony, New York.
1827 (Jenụwarị 18): Joseph na Emma lụrụ na South Bainbridge, New York.
1827: Joseph weghaara efere ọla edo nke nwere ndekọ banyere ndị si na Jerusalem kwaga Amerịka n’ihe dịka n’afọ 600 tutu a mụọ Kraịst.
1830: Akwụkwọ nke Mormon: Otu Akaụntụ Dere Aka nke Mormon N'elu Mbadamba Ihe E Dere n'Ap®l ™ nke Nifa∫ e bipụtara na Palmyra, New York.
1830: Nzukọ nke Kraịst hiwere na Fayette, New York. E degharịrị Nzukọ-nsọ ​​ahụ Nzukọ nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ terbọchị-Ikpeazụ a n’afọ 1838.
1830s (mmalite): Smith bidoro ịlụ di na nwunye di na nwunye.
1832 (Septemba 22–23): Smith kwupụtara mkpughe nke na-akọwapụta ọkwa-nchụ-aja.
1842: Smith guzobere nzukọ ụmụ nwanyị Mọmọn, Otu Enyem aka.
1843 (July 12): Smith kwupụtara mkpughe na-akọwa "ọgbụgba ndụ ọhụrụ na mgbe ebighị ebi" nke ịlụ otu nwanyị.
1843: Asịrị banyere omume otu nwanyị nke Joseph Smith gbasara na Nauvoo, Illinois.
1844 (March 16): Nauvoo Relief Society nwere nzukọ ikpeazụ edere ede.
1844 (June 7): Nkọwa na-atụ aro na ndị isi ụka LDS na-eme ịlụ karịa otu nwanyị ka e bipụtara na Nauvoo Expositor, mgbe nke a gasịrị Smith nyere iwu ka Ngosipụta 's pịa ebibi. E gosipụtara Smith na ọ na-akpali ọgba aghara mgbe ndị ụkọchukwu ikpeazụ ọkụ gbara akwụkwọ akụkọ a, a tụrụ ha mkpọrọ ka ha chee ebubo nke ịgha ụgha mgbe o kwusara iwu ikpe na Nauvoo.
1844 (June 27): Otu ndị na-eme ihe ike gbagburu Joseph Smith mgbe a tụrụ ya mkpọrọ na Carthage Jail, na Carthage, Illinois.
1844–1845: Nzukọ-nsọ ​​kewara n’ime Nzukọ-nsọ ​​nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ terbọchị-Ikpeazụ a, Nzukọ a hazigharịrị nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ terbọchị Ikpeazụ a, na ụfọdụ ndị otu nta.
1846–1847: Brigham Young, onye nọchiri Smith na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, haziri njem ndị nche gaa na Nnukwu Ndagwurugwu Salt Lake, na-ebute mbugharị nke ọdịda anyanwụ nke Ndị-nsọ terbọchị Ikpeazụ a.
1852 (August 28): Ndị isi ụka nabatara n'ihu ọha omume ịlụ karịa otu nwanyị na nke mbụ ya na adreesị na tlọikwuu Salt Lake.
1867: Brigham Young nabatara Relief Society n'ụzọ iwu.
1870: talọ Nzukọ Utah dị na Utah tozuru oke iji mee ka ụmụ nwanyị nwee ikike.
1872: Ndị Nwanyi di iche E bu ụzọ bipụtara ya.
1887: Iwu Edmunds – Tucker nke ndị omeiwu US gafere gosipụtara Chọọchị LDS ma bukọrọ ngwongwo ya na mbọ ịkwụsị omume ịlụ karịa otu nwanyị.
1890 (Septemba): Onye isi ala Wilford Woodruff wepụtara Manifesto, nke emere ka ọ bụrụ Nkwupụta ọkwa 1, nke kwuru na Chọọchị LDS anaghị akụzi ma ọ bụ kwere ka alụ karịa otu nwanyị.
1914: Iche nsogbu ego ihu, Nwanyi di iche kwụsịrị akwụkwọ.
1914: Ndị Akwụkwọ Mgbasa Ozi Enyemaka amalitere mbipụta.
1915: Ndị Magazin Otu Enyem aka dochie anya Akwụkwọ Mgbasa Ozi Enyemaka.
1940: Onye isi Otu Enyem-aka Amy Lyman Brown kwadoro ka ụmụ nwanyị LDS "bụrụ ndị nwere mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gọọmentị, ma ndị obodo ma ndị mba" na adreesị ya "Chafọdụ Chama Aka Womenmụ nwanyị" na Mahadum Utah State.
1946: Ndi ndu ndi uka nke LDS kwusiri ike umunwanyi banyere igba ogwu, asacha, na ememe mmanye.
1954: mbipụta nke Ọchịchị na Ọchịchị nke Chọọchị site n'aka LDS Onye ozi John A. Widtsoe buru ụzọ kọwaa ịbụ nne dị ka onyinye ụmụ nwanyị na onye enyemaka ibe ya na ọkwa nchụ aja Chọọchị LDS maka ụmụ nwoke.
1961: Onye isi oche David O. McKay nyere Kọmitii Na-ahụ Maka Ọchịchị Kasịnụ nke Chọọchị ka o dozie ihe nkụzi niile nke Chọọchị.
N'afọ 1970: Oge otu nọọrọ onwe ya nke otu Enyem aka, The Magazine Society, kwụsịre mbipụta n'ihi Mbido Nduzi nke Oku.
1971: Okwu pink nke Dialogue: A Journal of Mormon Echiche e bipụtara.
1972: Ndị omebe iwu US (ERA) nakweere nhazigharị ikike nha anya (ERA) ma zipụ ya na steeti maka nkwado.
1974: Exponent II E bu ụzọ bipụtara ya.
1976: Onye isi ala Spencer W. Kimball megidere usoro iwu LDS Church.
1977 (Jenụwarị 8): Onye ozi Boyd K. Packer nyefere adreesị ERA nye ndị otu na-emegide nkwenye na Pocatello, Idaho, bụ nke ọ kọwara ERA dị ka "okwu gbasara omume na mmụọ."
1979: Sonia Johnson, onye nchoputa nke Mormons maka ERA, chụpụrụ ya na Chọọchị LDS.
1993 (May 18): Boyd K. Packer mere ka amata ndị nwanyị, ndị na-edina ụdị onwe ha, na ndị a kpọrọ “ndị akpọrọ” ọgụgụ isi dị ka ihe egwu nye Lka LDS.
1993 (Septemba): Chọọchị LDS chụpụrụ ma ọ bụ chụọ ya na September isii.
1995: Onye-isi Nduzi Mbụ wepụtara “Ezinụlọ: Nkwupụta nye Worldwa.”
2004: Lisa Butterworth malitere Feminist Mormon Nwunye.
2007: Onye-isi-nduzi Otu Enyem-aka Julie B. Beck nyefere ya “Ndị Nne Ndi Maara” Okwu Nzukọ Ezumezu.
2012: Ndị otu niile ahaziri ahazi nke mbụ eyi uwe ogologo ọkpa gaa ụbọchị ụka.
2012: Onye isi ụka Church Thomas S. Monson kwupụtara na Chọọchị LDS na-ebelata afọ nke ụmụ nwanyị nwere ike ije ozi.
2013 (Machị): Kate Kelly wepụtara websaịtị damụ nwanyị Ordain.
2014: Akpọrọ Kate Kelly.
DOCTRINES / BỤ EKWUKWU NDỊ NA-ECHICHE NDỊ ỌZỌ
Nghọta nke okike na inwe mmekọahụ na-agwa ndị nkuzi na nkwenkwe nke Latter-day Saint nke ntọala banyere ọdịdị na ebumnuche nke Chineke, akụkọ na nzube nke okike, nzube mmadụ, mmekọrịta mmadụ na nwoke na nwanyị, usoro ezinụlọ, na ikike okpukpe. Maka ndị nsọ nke oge a, chi dị iche iche, na nkuzi na-egosi na nwoke na nwanyị ebighi ebi na-agbanwe agbanwe. N'ezie, ikere òkè na mmemme nke emume okpukpe n'ụdị okike edebere nwere nsonaazụ maka ndị Mọmọn na ndụ a na nke na-esote, ebe nkuzi dị n'etiti ihe ndị nsọ nke terbọchị Ikpeazụ a na-akpọ atụmatụ nke nzọpụta, echiche nke ịdị adị mmadụ nke na-egosi okike- dyadic, nwoke na nwanyi inwe mmekorita dika nke Chineke di nkpa nye atumatu Chineke maka mmadu na oganihu ebighi ebi ha. Nzukọ nke oge a nke Jizọs Kraịst nke Ndị Nsọ nke Ikpeazụ nwere ikike okpukpe (ụkọchukwu) maka ụmụ nwoke, na-ewulite alụmdi na nwunye di na nwunye dị ka ihe dị mkpa maka nzọpụta kachasị elu, ma na-ebute ma na-ebute onyinye ụmụ nwanyị na ezinụlọ dị ka ndị nwunye na ndị nne. Otú ọ dị, ndị ọkà mmụta na-ekwu na ndị inyom Mormon oge mbụ na-eme ememe ndị e debere taa maka ụmụ nwoke nọ n'ọkwá ndị nchụàjà. Iji kọwaa nsogbu a nke okike ọ dị mkpa iji nyochaa mmepe nke ụzọ atọ jikọrọ ọnụ nke nkwenkwe Mormon: nkuzi ndị gbara alụkwaghịm, ikike Chineke, na nke okpukpe. Onye ọ bụla ka etolitere n'ụzọ Joseph Smith n'etiti mmalite 1830 na ọnwụ ya na 1844.
Kpọmkwem, nkà mmụta okpukpe Mormon na-agụnye echiche banyere okike nke pụtara dị ka Joseph Smith bidoro ma mee ọtụtụ nwunye, ma ọ bụ ịlụ di na nwunye. Ọ bụ ezie na Smith bụ onye a maara nke ọma maka mbipụta ya nke Akwụkwọ nke Mormon na dịka onye amụma na onye guzobere Chọọchị LDS, onyinye ya kachasị mkpa na akwụkwọ nkuzi na-ebi na nkuzi banyere alụmdi na nwunye, Chineke, na ememe okpukpe na ikike nke malitere na egwu ya. banyere otutu nwunye. O doro anya kpọmkwem mgbe mbụ Smith ghọtara na ịlụ otu nwanyị dị ka usoro alụmdi na nwunye nke Chineke. Ya na Fanny Alger nwere mmekọrịta mmekọrịta nwoke na nwanyị (1816-1889), nwata nwanyị rụrụ ọrụ n’ime ụlọ n’ezinaụlọ ya, na mbido 1830. Orson Pratt (1811–1881), onye bụbu onye ndu Churchka, na Joseph F. Smith (1838–1918), nwa nwanne Joseph Smith, kọrọ na Smith kọọrọ ndị otu ntụkwasị obi ntụkwasị obi nke alụm di na nwunye di na nwunye site na 1831. Ọkọ akụkọ ihe mere eme Todd Compton chọtara otutu aha Smith. alụmdi na nwunye n’afọ 1832 ma ọ bụ n’afọ 1833, ma na-atụ aka ma ọ dịkarịa ala ịlụ di na nwunye iri atọ na atọ nye ụmụ nwanyị na mgbakwunye na nwunye mbụ ya na nwunye ya bụ Emma Hale Smith (1804–1897), n’agbata mgbe ahụ na ọnwụ ya na 1844.
Ọ bụ ihe siri ike ịchọta ebe a na-alụ nwanyị karịrị otu nwanyị n'ihi na Smith gosipụtara omume ahụ naanị ndị enyi tụkwasịrị obi. Dika Smith choputara otutu di na nwunye, o zikwara ndi nkuzi ozizi na ememe nke di Meri di iche iche. Ndị a na-akọwa echiche nke Chineke, nke ememe na ụlọ nsọ, nke nzọpụta, na nke alụmdi na nwunye na ezinụlọ ebighi ebi.
Nkọwa nke Joseph Smith banyere Chineke sitere na nkọwa atọ nke atọ (dịka ya na akụkọ 1832 nke ọhụụ mbụ ya, dịka ọmụmaatụ) na nkwupụta site na 1838 nke "mmadụ abụọ:" nna Chineke na nwa ya nwoke ("History n'ihe dị ka Summer 1832, ”P. 3 na“ History, 1838-1856, mpịakọta A-1 [23 Disemba 1805-30 Ọgọst 1834], ”p.3). Ọ natara mkpughe na a ga-ewu ụlọ nsọ nke a ga-eme ihe nsọ, na ihe nzuzo, na ụlọ nsọ ghọrọ ebe maka ememe alụmdi na nwunye ọtụtụ. N'oge na-adịghị anya tupu ọnwụ ya na 1844, Smith kwuru okwuchukwu, nke a na-akpọkarị "Nkwupụta Okwu Eze," nke o kwupụtara na Chineke "bụ mmadụ dịka gị onwe gị" ("Nkwupụta, Eprel 7, 1844, dị ka William Clayton si kọọ , ”Kr. 13). Echiche a, na Chineke biri ndụ dị ka mmadụ na mbara ala, akọwapụtara nke ọma mgbe Joseph Smith nwụsịrị, ma kọwaa ozizi ndị bụ isi nke LDS.
Nghọta Smith banyere ikike okpukperechi gbanwere n'ụzọ dị ịrịba ama na 1830. Akwụkwọ nke Mọmọn, nke izizi bipụtara na 1830, gosipụtara na ikike nke Chineke dị mkpa iji mezuo emume nsọ (emume nsọ) dị ka baptism, na izizi Mọmọn nke zoro aka na “ọkwa nchụ aja” pụtara na nkeji nke ọgbakọ ndị ndu ụka LDS nke e dere na June. 3, 1831. Site na mkpughe 22–23, 1832 mkpughe kwupụtara ọkwa nchụ-aja “ike nke Chukwu,” wee mata ọkwa ọkwa abụọ nke ọkwa nchụ-aja, otu dị elu na otu dị ala; “Ntụziaka banyere Ọkwa nchụ-aja,” nke e dere n'ihe dị ka Eprel 1835, mere ka ndị isi nke ọfịs na ọfịs nke ọ bụla doo anya. N’afọ 1834, Oliver Cowdery (1806–1850), onye ozi n’ime Nzukọ-nsọ ​​mbụ nke LDS, buru ụzọ kwuo na John Baptist enyefewo onwe ya ọkwa nchụ-aja nke Erọn na Smith na Mee 15, 1829. Mgbe Joseph kwadochara akụkọ ahụ, a nabatara akụkọ ọdịnala ya. n'ime Nzukọ-nsọ ​​nke LDS, na ọkwa nchụ-aja mepụtara ka sine qua non nke okpukpe okpukpe Mormon.
N'ihe nkuzi nke Smith banyere ọdịdị alụmdi na nwunye, nke Chukwu, na nke ụkọchukwu, gụnyere ndị gbanwere na nzaghachi maka ịhapụ otu nwanyị site na Chọọchị LDS, ndị nkuzi oge a na-akụzi mmekọrịta nwoke na nwanyị na ezinụlọ nuklia. Mormons na-akụzi na Chineke (Nna nke Eluigwe) bụ nwoke, na ọ nwere ma ọ dịkarịa ala otu nwunye nke eluigwe (nne nke nọ n'eluigwe). Ndị Mọmọn nwere okwukwe na Nne nke Igwe ka ha na ndị enyi Smith, ọkachasị nwunye ya bụ Eliza R. Snow (1804–1887), onye kesara ya mgbe ọ nwụsịrị. Ozizi LDS na-ekwusi ike na Nna nke Eluigwe na Nne bụ nne na nna nkịtị nke mmụọ nke mmadụ ọ bụla bụ onye a mụrụ, ma ọ bụ ga-amụ, n'ụwa. A gha muru ndi mmuo nile n’uwa ka ikwe ka onye obula nwaa onwunwa ma gosiputara na ya kwesiri igbaputa, ma a ga-ekpe ndi mmuo nile ikpe mgbe ha nwusiri site na otu ha si bie ndu. Ikpe ahụ ga-ekpebi ụdị nzọpụta onye ọ bụla ga-enweta. Ndị Mọmọn kwenyere na imirikiti ụmụ mmụọ na-echere ka amụọ ha n'ime ahụ mmadụ. Ihe a niile, dịka nkuzi nke Nzukọ LDS nke oge a, dị mkpa ka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke lụọ di na nwunye na temple, nwee ụmụ, ma zụlite ụmụaka ahụ dịka nkuzi ụka. Alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị na ezinụlọ na-esite na ya, dịka nkuzi nke terbọchị Ikpeazụ, ụgbọ ala nke iji kwalite atụmatụ nzọpụta nke Chineke maka mmadụ abụọ n'otu n'otu.
Ndị nsọ nke ụbọchị ikpeazụ kweere na e nwere isi ihe atọ dị mkpa nke nzọpụta, ma ọ bụ ogo ogo. Obodo nke Eluigwe bụ nke kasịsị elu nke ndị a, ma, nke nwere mmasị, nwere usoro atọ nke nzọpụta n'ime ya. A na-echere Alaeze nke Eluigwe maka ndị nwụrụ tupu "afọ nke ịza ajụjụ," ma ọ bụ tupu ha enwee ike ime baptizim mgbe ọ dị afọ asatọ, nakwa maka ndị na-arụ ọrụ nke ụlọ nsọ. Naanị ndị lụrụ di na nwunye na ụlọ nsọ nwere ike ị nweta ọkwa kachasị elu n'ime nzọpụta nke dị na Alaeze eluigwe. Echebere ụwa nke ala ahụ maka ndị bi ndụ dị mma, mana ha esonyeghị na Chọọchị LDS ma na-ebi ndụ kwekọrọ na nkuzi ya. Obodo nke eluigwe bụ ntọala kachasị dị ala, ọ bụkwa ebe ọtụtụ ndị mmehie, gụnyere ndị na-akwa iko na ndị na-egbu ọchụ, ga-anọ ndụ mgbe ọ nwụsịrị. Ndị nsọ nke ụbọchị nke ụka jiri ndụ tụnyere ndụ nke dị na Alaeze Telesia ruo ndụ n'elu ụwa, ma kụziere na ntaramahụhụ ebighi ebi ga-eme na Ochie Ọchịchịrị, nke e debere maka ndị na-agọnahụ Jizọs mgbe a kpugheere ha.
Ọganihu ebighi ebi bụ isi ihe na-ahazi nkwenkwe nke nkà mmụta okpukpe LDS, na, dị ka ozizi Chọọchị nke oge a, "okike bụ njirimara dị mkpa nke onye ọ bụla tupu oge eruo, na-anwụ anwụ, na njirimara ebumnuche ebighi ebi." Nkà mmụta okpukpe Mormon na-ekwusi ike na a mụrụ mmadụ niile na mbụ “nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị nke nne na nna nke eluigwe” (Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ na Kansụl nke Ndị-ozi Iri na Abụọ na 1995). N'ime ndu nke ụwa, dịka nkuzi nke Chọọchị LDS si kwuo, e gosipụtara atụmatụ abụọ iji nye ụmụ mmụọ nke mmụọ ohere ịnweta nzọpụta ebighi ebi: Jizọs (nwa mbụ nke nne na nna nke Eluigwe) kwusiri ike na mmụọ kwesịrị inwe nhọrọ, ma ọ bụ nnochi anya, ebe Lucifer (nwa nke abụọ nke Ndị nne na nna nke Eluigwe, ya mere nwanne Jizọs nwoke) tụrụ aro ka amụọ mmụọ wee dịrị ndụ na-enweghị nhọrọ, wee bụrụ nke a ga-eji nweta nzọpụta. Ozizi nsọ nke ụbọchị ikpeazu na-akọwa agha nke sochiri dịka Agha nke Eluigwe, nke Lucifer, ma ọ bụ Setan, nupụụrụ isi megide atụmatụ nzọpụta nke Jizọs chọrọ. Ndi mmuo ndi ahuru isoro atumatu nke nzoputa si otua nweta ohere ibi na aru ma nwaa ha na ndu iji gosiputa ntozu ha maka nzoputa, ebe ndi ahu ha na Setan dasiri bu ndi achudara n’eluigwe, ya na ha, we nwaa ndi mmadu ka ha kpafuo. site na Atụmatụ Nzọpụta n'oge ndụ.
Atụmatụ Nzọpụta chọrọ ka ndị mmadụ jiri ikike ha (ma ọ bụ mkpebi ha na omume ha) rụọ ọrụ iji gosipụta ọkwa nzọpụta ha tozuru na ndụ mgbe a nwụsịrị. Ozizi ndi LDS Church na-akwalite echiche na Mkpuchi Mmehie nke Jisos, nke ndi nsọ nke ikpeazu kwenyere na Ogige Ubi nke Gethsemane nakwa n'obe, na-enye ndi mmadu ohere icheghari na nmehie nile, choo mgbaghara, gbaghara ya, ma bie ndu ziri ezi site na na-eso nkuzi nke Nzukọ-nsọ. Maka ndị Mọmọn, ụzọ dị mma iji bie ndụ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Ozizi nke Mọmọn nke oge a na-esite n'echiche sitere na nkuzi Joseph Smith ka ha sitere na 1830 ruo 1844 iji kwusaa na Chukwu, mmadụ, na mgbe ebighi ebi bụ nwoke na nwanyị dichotomous na ebumpụta ụwa ma bụrụkwa nwoke na nwanyị. Dịka nkuzi nke Nzukọ LDS dị ugbu a, alụm di na nwunye na ịmụ nwa bụ “ihe dị mkpa na atụmatụ Onye Okike maka akara aka ebighi ebi nke ụmụ Ya” (Ndị Isi Nduzi Mbụ na Kansụl nke Ndịozi Iri na Abụọ 1995). A na-akọwa ịdị adị mmadụ n'ihu, n'oge, na mgbe ụwa gachara site na ọrụ na ọrụ dịịrị nwoke, nke mmekọahụ na-ekpebi.
N'ụzọ dị otú a, Atụmatụ Nzọpụta ahụ na-akọwa ụdị nwoke na nwanyị na nwoke na nwanyị na-eme ka ụmụ nwoke dị ka Chineke, na-adịru ebighị ebi, ma dị mkpa maka nzọpụta. Chineke bụ Nna, nne nne nke eluigwe, na ụmụ mmụọ bụ ndị a kọwara dịka ọdịdị ihe atụ nke ịbụ na mmekọrịta. Ọ bụghị naanị na ọtụtụ ụmụ mmụọ nke nne na nna nke eluigwe kwesịrị ime ka alụmdi na nwunye di na nwunye na mmepụta nke ụmụ mmadụ n'elu ụwa iji nye ozu ndị mmụọ na-echere na ndụ anwụghị anwụ, ma ozizi nke Ụbọchị Ndị Nsọ na-akọwa alụmdi na nwunye na ụlọ nsọ dịka ihe dị mkpa tupu ha ekee alụmdi na nwunye na ezinụlọ ebighi ebi, na ịnweta ogo kachasị elu na Alaeze Eluigwe. A na-eche na iwu ndị a na-arụ n'ụlọ nsọ na-adịgide adịgide ruo mgbe ebighi ebi, ọ bụghịkwa na alụmdi na nwunye nke ndị dị ndụ na-arụ n'ụlọ nsọ, ma ndị ụka nke ụbọchị ụka nwere ike itinye aka na ememme dịka ihe gbasara ndị ikwu nwụrụ anwụ na olileanya na onye ahụ a na-eme ememe ahụ ga-anakwere nkuzi nke LDS mgbe ọ nwụsịrị, ọ ga-anakwere iwu ahụ e mere maka ya.
Ọ bụ naanị ndị na-ejide ụkọchukwu ga-eme emume niile, a na-akụzikwara Mormons taa na ọrụ ezinụlọ chọrọ site na Plan of Salvation n'ụzọ ziri ezi kenyere ndị nwoke ọkwa nchụ-aja na ịbụ ụmụ nwanyị. Ndi otu nchuaja nke Mọmọn, nke n’achoghi nkuzi ọpụrụiche nke enyere ndi nwoke na ndi nile, inye ikike ime ihe n’aha Chineke. Boysmụ nwoke niile e chere na ha tozuru oke nwere ike ịnata ọkwa nchụ-aja Erọn, ọkwa nchụ-aja dịkarịsịrị nta, n’afọ iri na abụọ site na-ibikwasị ndị aka-nchụ-aja ndị ọzọ aka. A na-enyefe ọkwa nchụ-aja Melkizedek ahụ (ma-ọbụ karịa) n’elu ụmụ nwoke kwesịrị ntụkwasị-obi ndị gbara afọ iri na asatọ ma-ọbụ karịa, OznỌd site na-ibikwasị aka nile. Ndị isi ụka nke LDS ugbu a na-akụzi na ụmụ nwoke na-edu site n'ọchịchị, na ụmụ nwanyị, ọkachasị dị ka ndị nwunye na ndị nne, ka ndị ụkọchukwu na emume ya na-agọzi ma na-eme ka ọgaranya.
Chọọchị LDS na-arụ ọrụ n'okpuru idu ndú ndị nchụàjà n'ọkwa ọ bụla. A na-ahazi Mormonism site na otu otu onye ndu na-arụ ọrụ na ndị ndụmọdụ abụọ, na ngalaba a na-akpọ ndị isi, iji duru ndị otu dị iche iche. Na ọkwa nke Nzukọ-nsọ ​​LDS zuru ụwa ọnụ Onye-isi-nduzi na ndị ndụmọdụ ya abụọ bụ Onye-isi Nduzi Mbụ. A na-akuzi Ndị-nsọ Latbọchị-Ikpeazụ a na Onye-isi-nduzi nke Nzukọ-nsọ ​​bụ onye-amụma nke oge a ma nwekwa ike nke ikpughe mkpughe nile sitere na Chineke. Otu Ọnụ-ọgụgụ-juru-aka nke Iri na Abụọ ahụ, onye ndị otu ya ka a na-akpọ Ndị-ozi, na-achị n’okpuru Onye-isi Nduzi nke Nzukọ-nsọ, ma ndi-otu ume ka ha rube isi na ndụmọdụ ha, ma nke Onye-isi-nduzi. Quorums of the Seventies, nke dị asatọ ugbu a gburugburu ụwa, na-eje ozi dị ka ndị ozi na ndị nnọchianya nke Onye isi oche Chọọchị na Quorum nke mmadụ iri na abụọ na ndị òtù Chọọchị. Na mpaghara mpaghara, ndị nwere ụkọchukwu nwoke na ngalaba a na-akpọ oche ndị isi na-eduzi ọtụtụ ọgbakọ. Otu bishọp na ndị ndụmọdụ ya abụọ n’edu ọgbakọ ọbụla n’otu n’otu, akpọrọ ward. Ya na ọkwa nchụ-aja, nwoke na-anọkọkwa n’ezi n’ezi na ụlọ ya, ngalaba kacha nwee nhazi na ndụ Mọmọn na mgbe ebighi-ebi.
OZI NDỊ NA-ECHICHE NA NDỊ ỌMỤKA NA-ECHICHE N'ỤLỌ NCHE
Na Nzukọ nke oge a, ike ụmụ nwanyị nke Latbọchị Ikpeazụ a na-esonye na Relief Society, nzukọ inyeaka ụmụ nwanyị. Womenmụ nwanyị ndị a na-ahọpụta site n’aka ndị isi nchụ-aja ka ha lekọta Otu Enyem-aka, nzukọ ụmụ-nwanyị na-eto eto (Womenmụ-agbọghọ nta), na inye-aka nke ụmụ-ntakịrị (Praịmarị) n’ogo nile nke Nzukọ-nsọ ​​LDS, site n’isi ndu otu ndị a rue ọkwa ọgbakọ nke mpaghara. Womenmụ nwanyị nwekwara ike ije ozi oge niile, agbanyeghị na-atụghị anya ka ha siri ike ma ọ bụ gbaa ume ije ozi dịka ụmụ okorobịa, na ọrụ ụmụ nwanyị dị iche n'ogologo na oge site na ọrụ ndị nwoke (lee anya n'okpuru). A na-agba ndị nwanyị LDS nke oge a ume ka ha lụọ nwoke n'ụlọ nsọ, nwee ụmụ, ma jeere ezinụlọ ha ozi. Womenmụ nwanyị Mọmọn nwere ọtụtụ ọnọdụ na Nzukọ-nsọ ​​LDS nke oge a, dịka ndị nduzi ukwe, ndi ndebe akwụkwọ ngalaba, ma ọ bụ ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ Sọnde, ma jigide ọkwa na Praịmarị na Youngmụ-agbọghọbịa, yana n’ime Otu Enyem-aka. A na-akpọ Ndị-nsọ Latbọchị-Ikpeazụ a “ọkwa” site n’aka ndị-isi nchụ-aja n’ogo dị mkpa, ma, ọ bụrụ na nwanyị anabata ọkpụkpọ oku ya, dịka ndị-otu nile siri gbaa ya ume ime, a na-ewepụ ya iche site na-ibikwasị aka nile nke ndị ndu ọkwa nchụ-aja nye ọnọdụ ya. Ndị isi nchụ aja na-ahapụkwa ndị òtù Chọọchị n'ọkwá.
Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị na-esonye ma na-edu ndu ugbu a n'okpuru nche anwụ nke ikike ndị ụkọchukwu nke ụmụ nwoke, enwere ụfọdụ ihe akaebe nke nnwere onwe dị ukwuu na ọrụ ụmụ nwanyị na akụkọ ihe mere eme; enwere otutu nkparịta ụka nke oge a na Chọọchị LDS nke oge a banyere ya. Na mbido 1840s, Sarah Granger Kimball (1818–1898) haziri Ladtù Ndị tomụ nwanyị ka ha rụọ ọrụ ebere n’etiti ndị-nsọ Latbọchị Ikpeazụ a, na mgbe enyere iwu nke otu ahụ na Joseph Smith maka nnabata ya ọ kpọrọ ha ndị magburu onwe ha, mana ọ gwara ha ụmụ nwanyị ndị ọ chọrọ ike mepụta otu nzukọ “n'okpuru ọkwa nchụ-aja, n'ụkpụrụ nke ọkwa nchụ aja,” ihe ga-abụ Otu Enyemaka. N’ime nzukọ izizi ya na Maachị 17, 1842, ụmụ nwanyị bịaranụ jiri otu olu họpụta onye isi ala Emma Smith, ma ọ họpụtara ndị ndụmọdụ ya abụọ, Sarah M. Cleveland (1788–1856) na Elizabeth Ann Whitney (1800–1882), na odeakwụkwọ, Eliza R Snow. (1804-1887). Eliza Snow dere banyere Joseph Smith na-agwa ndị otu a na ndị ọrụ Otu Enyem aka “ga-anọ n’isi Society.” Ha kwesịrị, Smith ka edekọtara dịka onye nkuzi, “ga-anọkwa dịka Onye-isi Nduzi na-anọzikwa Nzukọ-nsọ.” Ọ gakwara n’ihu kwuo ka Otu Ndị-isi Nduzi Otu Enyem-aka kwesịrị “ije-ozi dịka usoro iwu,” na “mkpebi ha nile ka a ga-ewere dịka iwu; ma mee otu a ”(“ Nauvoo Relief Society Minute Book, ”peji nke 7).
Otu Relief Society ka a haziri dịka otu òtù na-eme mkpebi nke na-achịkwa onwe ya. Ọzọkwa, data akụkọ ihe mere eme na-egosi na ụmụ nwanyị Relief Society ka enyere iwu ka ha na-achịkwa emume nsọ (dịka ịsa ahụ, ite mmanụ, na ịgọzi ndị ọrịa) edebere na Chọọchị LDS nke oge a maka ụmụ nwoke ndị nwere ọkwa nchụ aja. Na nzukọ Eprel 28, 1842 nke Otu Enyem-aka Joseph Smith kwupụtara, “Ana m enyefe gị igodo nye gị n’aha Chineke ma otu a ga-a rejoiceụrị ọ andụ na ihe ọmụma na ọgụgụ isi ga-agbadata site n’oge a” (“Nauvoo Relief Society Minute Akwụkwọ, ”peeji nke 40). N'otu nzukọ ahụ ọ nyere ntụziaka, “N'agbanyeghị onye kwere; ihe ịrịba ama ndị a, dịka ịgwọ ndị ọrịa, ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ [na wdg.] kwesịrị ịgbaso ndị niile kwenyere ma nwoke ma nwanyị '' ("Nauvoo Relief Society Minute Book," p. 35-36). Abalị iri abụọ na asatọ n’ọnwa Eprel, 28 nke Snow na-edekọ Joseph Smith na-ajụ ụmụ nwanyị nke Otu Enyem-aka “ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịhụ ụzọ. . . na echiri ha echichi, ọ bụ ihe ùgwù nke ndị ahụ e dobere iche ijikwa n’ikike ahụ nke e nyere ha — ma ọ bụrụ na ụmụnne nwanyị ahụ ga-enwe okwukwe iji gwọọ ndị ọrịa, ka mmadụ niile jide ire ha, ma ka ihe niile na-aga. ” Ọ gara n'ihu dokwuo anya, “gbasara nwanyị na-ebikwasị aka. . . nmehie ọ bula adighi kwa ọzọ n'aru nwayi nke nyingbikwasi ndi-nri aka ike kari ime ka miri btinga iru: na ọ dighi nmehie diri aru ọ bula ime ya nke nwere okwukwe, ma-ọbu asi na ọria adighi okwukwe nwe ọgwughachi. site na nchịkwa [ir] ”(“ Nauvoo Relief Society Minute Book, ”p. 1842).
E hiwere Otu Enyemaka n’otu oge mgbe Joseph Smith malitere ikwupụta omume ya ịlụ karịa otu nwanyị nye ndị ibe ya tụkwasịrị obi, gụnyere nwunye ya Emma. Ọ ga-abụ na Emma mụrụ na 1836 nke mmekọrịta nwoke na nwanyị na Fanny Alger, o meghachikwara omume site n'ịchụpụ nwa agbọghọ ahụ n'ụlọ Smith. Eliza R. Snow bi n'ụlọ Smith n'oge ahụ, ma kọwaa Emma ka ọ na-eme "ọgba aghara dị otú ahụ" mgbe ọ chọpụtara mmekọrịta di ya na nwa agbọghọ ahụ. N’amaghị na Emma, ​​Eliza R. Snow lụrụ Joseph na June 1842, ihe na-erughị izu iri mgbe Emma họpụtara ya dịka odeakwụkwọ Otu Enyemaka; ha abụọ nwere obi ilu mgbe Emma matara banyere mmekọrịta ahụ.
Joseph Smith ekwetaghị ịlụ karịa otu nwanyị n'ihu ọha, mana ka ọ malitere ụfọdụ n'ime omume ọ kọwara n'otu oge ahụ nkà mmụta okpukpe gbara gburugburu alụmdi na nwunye ọtụtụ. Dịka e kwuru n'elu, alụm di na nwunye di na nwunye Smith nwere njikọ chiri anya yana ozizi na mmemme ndị na-emetụta ọdịdị nke Chineke, alụmdi na nwunye, na nzọpụta. Emere ememe alụmdi na nwunye di na nwunye na nzuzo, wee kọwaa na Nauvoo, ụlọ ahịa Illinois nke nwere ụlọ ahịa LDS Church na mbido 1840s. E kere Otu Enyem aka n'otu ebe, na n'otu oge. Na 1841 Smith gwara ndịozi iri na abụọ ya (ndị isi kachasị elu na Chọọchị LDS mgbe Joseph gasịrị) banyere alụmdi na nwunye di na nwunye, ha wee malite ịlụ ọtụtụ nwunye n'oge na-adịghị anya. Ka ọ na-erule 1842, Smith webatara onyinye alụm di na nwunye (onyinye nke ike sitere na Chineke) nye mmadụ itoolu ndị ọzọ ọ tụkwasịrị obi n’elu ụlọ elu nke ụlọ ahịa Nauvoo ya. Smith kụziri na alụm di na nwunye ndị “akàrà” site na mmemme ụkọchukwu nke nzuzo ga-alanarị ọnwụ; n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha bụ alụmdi na nwunye ebighi ebi. Ọ bụghị alụmdi na nwunye di na nwunye niile ka etinyere n'ụzọ dị otú a, dị ka ụfọdụ maka ndụ ma ọ bụghị mgbe ebighị ebi, mana alụmdi na nwunye di na nwunye ebighi ebi dị ka ụdị alụmdi na nwunye kachasị mkpa, ma kpọọ ya alụmdi na nwunye nke eluigwe. N’afọ 1843 niile wee rue mgbe ọ nwụrụ n’afọ 1844, Smith gara n’ihu na-akuziri ụmụ nwoke na ụmụnwaanyị mmemme a dị nsọ na nke nzuzo. Emume alụmdi na nwunye, ma ọ bụ akara, gụnyere ịsa ahụ na ite mmanụ, na-edo ha nsọ ka ha bụrụ ndị eze ma ọ bụ ndị eze nwanyị na ndụ mgbe a nwụsịrị, ma nye ha uwe ime dị nsọ, nke a gwara ha ka ha eyi. Emechiri Smith na nwunye ya Emma (onye ọ lụrụ n'ụzọ iwu na 1827, na May 28, 1843, wee bido ya n'ememe nzuzo ahụ na Septemba nke afọ ahụ. Na mkpokọta, Joseph malitere ihe karịrị ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke iri ise na emume ndị a, tinyere ọtụtụ ndị nwunye ya dị ọtụtụ, na ndị niile bidoro hibere Otu Ọnụ notọ.
Asịrị banyere ịlụ karịa otu nwanyị Smith gbasara na Nauvoo site na 1843, na 1844, mgbe Joseph Smith kwuchara ka ọ lụọ nwunye onye bụbu Onye Ndụmọdụ, Nauvoo Expositor, akwụkwọ akụkọ LDS Church, bipụtara akwụkwọ akụkọ nke na-atụ aro ndị ndú nke ụka na-eme ịlụ otu nwanyị. Smith nyere iwu ka Ngosipụta 's pịa ebibi, na Nauvoo City marshal na ìgwè mmadụ ọkụ na pịa. Smith kwupụtara iwu ikpe na ọgba aghara nke sochirinụ, e mekwara ya ebubo na ebubo nke ọgba aghara. Josef Smith, nwanne ya nwoke Hyrum (1800-1844), na ndị isi Mormon ndị ọzọ wakporo June 27, 1844 mgbe a tụrụ ha mkpọrọ na Carthage, Illinois, Josef nwụkwara mgbe a gbagburu ya wee daa na windo nke abụọ.
Mgbe e gbusịrị Smith na 1844, ihe ka ọtụtụ n’ime Ndị Nsọ nke Ikpeazụ nakweere Brigham Young dị ka onye nọchiri ya ma soro Young gaa n’ihe ga-abụ Territory nke Utah. N'ime iri afọ ndị mbụ nke ndụ Mormon na Utah, na mgbakwunye na ịrụ ọrụ dị ka ndị nne, a gbara ụmụ nwanyị ume ka ha sonye na agụmakwụkwọ ka elu na ọrụ, ma rụọ ọrụ dị mkpa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agụmakwụkwọ. Brigham Young kwusiri ike na 1868 na “anyị chọrọ ka ụmụnwanyị nwanyị, dịka uche na ọnọdụ ha siri dị, ga-amụta ndezi akwụkwọ, telegrafia, ịkọ akụkọ, idepụta ihe, ode akwụkwọ n’ụlọ ahịa na ụlọ akụ, na ngalaba ọ bụla nke ihe ọmụma na ụdị ọrụ dabara ha mmekọahụ, na dịka ọtụtụ ụtọ na ikike ha si dị. N’ụzọ dị otu a zụrụ azụ, ihe niile n’enweghị ọdịiche dị na nwoke na nwanyị, ga-enwe oghere n’emeghị njakịrị na mmegbu ”(Derr 1978: 392). Mgbe e guzobere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu na Utah, ụmụ nwanyị debanyere aha na ọnụego nke ụmụ nwoke. Utah bụụrụ onye nnọchite-anya steeti nwanyị nke mbụ na United States, Martha Hughes Cannon (1857–1932), bụkwa onye dibia na onye mmekorita, yana ụlọ nke onye-isi-nduzi mbụ nke nwanyị kansụl obodo nile, Mary W. Chamberlain ( 1870–1953). Site na 1872 rue 1914, ụmụ nwanyị Mọmọn deziri ma bipụta ya Nwanyi di iche, magazin nke kwadoro ka ụmụ nwanyị nwee ikike ime ihe, na itinye aka na ụmụ nwanyị na agụmakwụkwọ ka elu, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ọrụ aka ọrụ. Agbanyeghị na akwụkwọ akụkọ ahụ abụghị akwụkwọ ọkwa nke Nzukọ LDS, onye ndezi mbụ ya, Louisa Lula Greene Richards (1849–1944), malitere oge a site na ngọzi nke Onye-isi Nduzi Otu Enyem-aka, Eliza R. Snow, onye bụ mgbe ahụ ọtụtụ nwunye nke Onye-isi Nduzi Brigham Young. Ndị isi Otu Enyem-aka kwusiri ike maka ntuli-aka nke ụmụ nwanyị, ma kpọọ Susan B. Anthony (1820–1906) ka ọ gaa Utah, nke o mere. Ndị omebe iwu mpaghara Utah mere ka ụmụ nwanyị nwee votu ahụ, wee nye ha ohere ịtụ vootu na 1870. Mgbe ndị Utah tozuru oke ịtụ vootu na 1887 kagburu ikike nke Edmunds – Tucker Act, mbọ iji kwụsị ịlụ karịa otu nwanyị, isi Utah nke National Nwanyị Suffrage Association ka emebere n'afọ 1897. N'ime iri afọ ndị ahụ, ụmụ nwanyị Mọmọn gara n'ihu isonye na ịsa ahụ, ite mmanụ, na ịgwọ ndị ọrịa, na ikpuchi ma nye ụmụ ha ngọzi.
AJỤỌ / AHỤKWU NDỊ ỌZỌ
A na-egbochi ụmụ nwanyị oge a na-eme oge a ka ha ghara ime emume ndị ụmụ nwanyị Mormon mere n'ime iri afọ ndị mbụ nke Chọọchị, ma e wezụga ịsa na ite ndị inyom ndị ọzọ mmanụ dị ka akụkụ nke onyinye onyinye ụlọ nsọ. Ndị isi Nzukọ-nsọ ​​nke LDS kwụsịrị ka ụmụ nwanyị na-ekere òkè na ọgwụgwọ, ịsa ahụ, na emume-nsọ nile na Julaị 1946, mgbe Joseph Fielding Smith (1876–1972), mgbe ahụ onye otu Kworum nke Iri na Abụọ (nke bụ Onye-isi nke iri nke Nzukọ LDS), kuziri. ndị ndu nke Otu Enyem-aka na na agbanyeghị na "enwere ike kwere, n'ọnọdụ ụfọdụ na nkwado nke ọkwa nchụ-aja, ụmụ nwanyị nwanyị ịsacha ma tee ụmụnne nwanyị ndị ọzọ mmanụ," "ọ ka nnọọ mma" maka ụmụ nwoke ndị nchụ-aja ịme mmemme ndị a (Newell 1981: 41).
Participationmụ nwanyị na-ekere òkè n'ememe okpukpe n'èzí ụlọ nsọ kwụsịrị na oge nkuzi nke Chọọchị LDS malitere ịmalite ọganihu nke ndị nchụàjà na ịbụ nne dị ka ihe na-emekọ, ma dị iche. Womenmụ nwanyị nke Latbọchị Ikpeazụ a duziri nnukwu ọrụ dị ka n'oge 1970s. Ha kere Relief Society Social Services na 1919 wee duzie mmemme a ruo 1929, wee bido usoro nke imepụta ụlọ ọgwụ iji gwọọ ụmụaka na 1911 nke toro na Primary Hospital nke inmụaka na Salt Lake City site na 1922, dịka ọmụmaatụ. N'agbanyeghị nke ahụ, site na ndị 1950s LDS Church ndị isi malitere ịkọwa onye ndu okpukpe dị ka nanị ebe ụmụ nwoke nọ n'ọkwa nchụàjà, na igosi nne dị ka ngalaba na ibu ọrụ ụmụ nwanyị kwekọrọ. Na mbipụta ya nke 1954 nke Ọchịchị na Ọchịchị nke Chọọchị, Onye-ozi-LDS Onye-ozi John A. Widtsoe buru ụzọ kọwaa ịbụ nne dịka onyinye na ebumnuche ụmụ nwanyị, dịka usoro nchụ-aja nke ụmụ nwoke. A kọwapụtara nkọwa ahụ ma chee na ndị isi ụka LDS na-abawanye na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ na narị afọ nke iri abụọ na mbụ.
Mgbanwe abụọ gbanwere nyere aka ịkpụzi ụdị okike na ikike na Mormonism. Nke mbu, Nmekorita nke ndi nchu aja nchikota mkpebi na ego n’okpuru onodu kachasi elu nke ndi ndu LDS Church. N’afọ 1961, Onye isi Nduzi nke Nzukọ-nsọ ​​David O. McKay (1873–1970) gwara Kọmitii nke Ọkwa Nchụ-aja nke Nzukọ-nsọ ​​ka ọ “mezue” ihe ọmụmụ nile na usoro ọmụmụ na nzukọ nke Nzukọ-nsọ ​​nile nke LDS, ma site n’afọ ndị 1970s, usoro mmekorita ahụ etinyeworị Otu Enyem-aka n’okpuru ikike. nke Kworum Ndi-Ozi Iri na Abụọ. Ndi otu ndi otu Enyem aka hapuru ichikota ego ha nwere, ma nyefee ihe kariri $ 2,000,000 n’ime ulo uka LDS. Ọzọkwa, ha anaghịzi ekepụta nkuzi na akwụkwọ ntụzi aka nke ha, na Magazin Otu Enyem aka, otu a na - ebipụta kwa oge, kwụsịrị iji otu akwụkwọ LDS Church maka ndị okenye niile, Ensign.
Akụkụ kachasị mkpa nke Mmemme Mmekọ Ndị Nchụ aja na-etinyere n'oge oge arụmụka mba banyere nhazigharị ikike nha anya (ERA). Arụmụka a, malitere ka ERA gafere ndị US Congress wee ziga ya na steeti maka nkwado na 1972, metụtara ndị isi ụka LDS ịkọwapụta okike na ọrụ okike, na mmekorita mere ka mmeghachi omume kariri nke nwanyi na ERA karie. enwere ike tupu. Nzaghachi azịza nke a ma kwalite ụdị ọrụ ndị nchụ-aja nke LDS nke onye-isi na ibu ọrụ.
Na 1975, LDS Akụkọ nke Church bipụtara akwụkwọ akụkọ megidere nkwado nke ERA, na afọ na-eso ya Onye isi Nduzi Mbụ, n'okpuru ntụzịaka nke Onye isi ala Spencer W. Kimball (1895–1985), mere mmegide megide usoro iwu Churchka nke officialka. Dika ndi ndu uka nke LDS weputara ndi mmadu okwu banyere nkwenye nke ERA, edeputara ihe ndi edere na akwukwo ndi uka nke na eme ka mmeghari nke nzuko ghara imeghari ya, ma jiri ulo uka na ihe ndi ozo dozie ndi nwanyi LDS megidere mmeghari ahu, ha were oru ndi nchu-aja. iwu iji mesie ike na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dị iche na ndụ na mmetụta uche, ma nwee ibu ọrụ dị iche iche. Ha kwusiri ike na ọ dị mkpa ka ụmụnwaanyị lụọ nwanyị ma mụọ ụmụ, na ọrụ kacha mkpa ụmụ nwanyị bụ dị ka nwunye na nne, na ọrụ dịịrị ha dị ka ndị nne ekwesịghịkwa ịgụnye ọrụ akwụ ụgwọ na mpụga ụlọ. Na 1980, Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ bipụtara Chọọchị na Ihe Ntuzi Kwesịrị Ekwesị: Ntụle Omume, nke nwara ike a ikpe megide ERA, na akụkụ site na-ekwusi ike na mmeghari ahụ bụ ihe egwu nye ọrụ ezinụlọ. Ihe omume ndị ERA na-akwadoghị na-aga n'ihu ruo mgbe e meriri mmegharị ahụ na 1979 mgbe naanị iri atọ na ise n'ime steeti iri atọ na asatọ dị mkpa kwadoro ya. Ọkọ akụkọ ihe mere eme bụ Martha S. Bradley-Evans edepụtawo ojiji nke Chọọchị LDS ji usoro na akụrụngwa iji gbochie Ndozigharị ikike nha anya a chọrọ, gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ịgbagha ma na-eme mkpọsa megide ebumnuche na isi nkwado ikike (Bradley 2005).
Ndị ndu ụka LDS nke oge a ka na-aga n'ihu na-emegide ụmụ nwanyị na atụmatụ ndị ọzọ ha chere na ha na-eyi egwu isi ọrụ ụmụ nwanyị dị ka ndị nne. Agbanyeghị na ndị ndu ụka LDS na nke ugbu a kwere ka ụfọdụ ụmụ nwanyị nwee ike ịrụ ọrụ na mpụga nke ụlọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ amanye ha, dị ka ọrịa nke di, ihe nkuzi nke Prilọ Nzukọ Mmekọahụ na-agba ụmụ agbọghọ ume ka ha lụọ onye nchụaja, kụzie na ndị di na nwunye kwesịrị ịlụ na temple na ndị nwunye kwesịrị inwe ụmụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike, na, dịka ndị nne, ụmụ nwanyị kwesiri ịrara onwe ha nye maka nlekọta nke di, ụmụaka, na ụlọ. N’afọ 1995, Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ na Kansụl nke Ndị-ozi Iri na Abụọ wepụtara “Ezi-na-ụlọ: A Mkpọsa nye Worldwa,” nke Onye-isi-nduzi Gordon B. Hinckley (1910–2008) bu ụzọ gosi ụmụ nwanyị nọ na Relief Society. Nkwupụta ahụ kpọrọ alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị “dị mkpa maka atụmatụ [Chineke],” na-ekwupụta “iwu Chineke” ịmụ ụmụ ka dị “ike ọrụ,” ma na-ekwusi ike na “site na nzube Chukwu” ndị nna kwesịrị ịbụ ndị isi na igbo mkpa ezinụlọ ha, ebe ndị nne “Isi sekpụ ntị na-elekọta ụmụ ha.” Ọrụ ndị a metụtara ụmụ nwoke na-abụkarị ihe a na-akụzi na nkuzi LDS Church, gụnyere na ihe ọmụmụ, Akwụkwọ General Conference, na mbipụta nke Church. Ha na-achịkwa okwu LDS nke oge a banyere okike, mmekọahụ, na njirimara nwoke na nwanyị. Ezinaụlọ niile nke Mọmọn kwesịrị igosipụta nkwupụta “Ezi-na-ụlọ” ahụ n’ezi n’ụlọ ha.
A na-akọwa ọdịiche dị iche iche nke nwoke na nwanyị, yana ịlụ di na nwunye na mmeputakwa, dị ka Chineke na ebighi ebi na nkà mmụta okpukpe Mormon dị ugbu a, wee gbasaa nkuzi na emume metụtara mmekọahụ. N’afọ 1993, Onye ozi Boyd K. Packer (1924–2015) mere ka amata ndị nwanyị, ndị na-edina ụdị onwe ha, na “‘ ndị akpọrọ ‘ndị nwere ọgụgụ isi” ’dị ka ihe egwu nye Lka LDS na adreesị nke Council Council niile. Na 2000s, ndị isi ụka nke LDS ejiriwo nduzi na ntuziaka jikọtara ọnụ iji kwughachi ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ebighi ebi, nke ha na-ejikwa iji kwalite okwu na alụm di na nwunye. N’okpuru Onye-isi-nduzi Gordon B. Hinckley, Nzukọ-nsọ ​​LDS kwadoro ụzọ nke Proposition 22, atụmatụ California na 2000 nke kọwara alụmdi na nwunye dịka n’etiti otu nwoke na otu nwanyị, na n’okpuru onye nọchiri ya, Thomas S. Monson (b. 1927), Onye-isi Nduzi Mbụ nyere ndị ụka ụka iwu ka ha tinye oge na akụ ha n’ịgbaghara Mmasị 8, nke ga-ekwe ka alụm di na nwunye na California ma ọ gafere n’afọ 2008. Ruo ugbu a, ọrụ Churchka Mormon na-emeri alụm di na nwunye, nke iwu kwadoro na steeti America niile na 2015 site na Courtlọikpe Kasị Elu, gbasaa karịa mgbalị LDS na okwu ọ bụla ọzọ ebe ọ bụ na mkpọsa ya iji merie nkwado nke ERA.
Mormon nke nwanyị nke oge a jikọtara ọnụ na nzaghachi nke ndị isi ụka LDS Church na nzaghachi nke nwanyị na ERA. A na-ahụkarị ya dị ka nke sitere na obere ìgwè nke ndị nwanyị na-ahụ maka ọdịmma nwanyị nke Boston bụ ndị malitere ịgbakọ iji kwurịta okwu banyere nwoke na nwanyị na ebe ụmụ nwanyị nọ na Chọọchị LDS na 1970. Ndị otu ahụ zutere n'ụlọ mbụ nke ọkọ akụkọ ihe mere eme nke America Laurel Thatcher Ulrich (b. 1938) ), ma gụnye onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke ụmụ nwanyị LDS bụ Claudia Bushman (b. 1934) na ndị ọzọ ga-aga n'ihu inye onyinye dị mkpa na nke ndụ niile na nwanyị Mormon. Na Julaị nke afọ ahụ onye editọ nke Dialogue: A Journal of Mormon Echiche, otu oge edepụtara onwe ya maka nyocha okwu na echiche nke mmasị ndị Mormons, gara Ulrich n'ụlọ ya, ma mesịa kpọọ ìgwè ndị Boston ka ha mepụta ọdịnaya maka mbipụta pụrụ iche nke akwụkwọ akụkọ ahụ. N'ịbụ nke e dere na pink, mbipụta nke Summer 1971 bipụtara site na Ulrich na Bushman, ma zụlite ihe ga - abụ nchegbu etiti ncheta nke nwanyị Mormon: echiche nke nne na - Eluigwe, ohere ka ukwuu maka nduzi okpukpe nke ụmụ nwanyị na Mormonism nke narị afọ nke 19, ndị inyom Mormon nke oge a na ikike nke ndị nchụàjà, na atụmanya oge dị iche iche nke ịbụ nwunye na nne maka ụmụ nwanyị Mormon. Mgbe The Magazine Society kwụsịrị na 1970, Bushman, Ulrich, na ndị inyom Boston ndị ọzọ kere Exponent II, bu ụzọ bipụtara na 1974, nke sitere n'ike mmụọ nsọ malite na narị afọ nke iri na itoolu Nwanyi di iche.
Dika mmegide nke ndi isi ulo uka LDS megide ERA putara ihe karia na ngwụcha 1970s, Churchka malitere ịkatọ ụfọdụ ndị Mormon feminists. Na 1978, Sonia Johnson (b. 1936) kwadoro Mormons maka ERA wee bido ikwu okwu n'ihu ọha na nkwado nke Oge. Mgbe o nyesịrị adreesị 1978 na nzukọ nke American Psychological Association maka ihu ọma nke ERA, a chụpụrụ ya na Chọọchị LDS na 1979. Nchụpụ Johnson dọtara mmasị nke mgbasa ozi mba. Morfọdụ Mormon feminists, nchegbu site na-eto eto mgbochi nwanyị mmetụta ha chere na Chọọchị LDS, degaara President Spencer W. Kimball na 1979 ịgwa ya na ha nwere ụjọ na nzukọ LDS. N'agbanyeghị mmetụta ndị a, n'agbanyeghị agbanyeghị ike na mmegide siri ike megide ERA site na ndị isi ụka LDS, na 1980 ndị nwanyị Mormon na-eme ihe omume iji kpọọ uche gaa n'ebe ụmụ nwanyị nọ na Mormonism: Mormon feminists gbazitere ụgbọ elu ka ọ na-efefe nnukwu nzukọ Nzukọ ụka na-esochi ọkọlọtọ. okwu ndị dị ka "Nne nke Eluigwe hụrụ ERA n'anya," na ihe karịrị ụmụ nwanyị Mormon nwanyị iri abụọ, gụnyere Johnson, ka ejidere mgbe ha jikọtara onwe ha n'ọnụ ụzọ nke Bellevue, ụlọ nsọ Washington na-eme ngagharị iwe maka mkpebi antika na-emegide ERA. [Foto dị n'aka nri]
N'agbanyeghị nke ahụ, na 1980s Mormon feminism na-etinye uche n'etiti ndị nkụzi na ndị ọzọ na-aga n'ihu na nke na-aga n'ihu na-adị nsọ nke ndị Senti na-esonye echiche ọtụtụ site na mbipụta na na symposia. Na mgbakwunye na Dialogue, nke na-enyocha ihe gbasara Mormonism ma ọ bụghị akwụkwọ edemede LDS Church, Sunstone amalitere na 1974 dịka magazin nke Chọọchị na-akwadoghị, ma na-etinye aka na nkwurịta okwu na-emeghe n'etiti ndị Mormons. Akwụkwọ akụkọ abụọ, na Sunstone Symposium, ihe omume ụbọchị anọ na-eme kwa ụbọchị na Salt Lake City, jere ozi dị ka ụgbọala ndị dị mkpa iji gbanwere echiche na ozi na 1980s. Ụfọdụ òtù ndị ọzọ, dịka Òtù History History nke Mormon, bụ nke malitere ịmepụta onwe ya Journal of Mormon History na 1974, nyekwara ikpo okwu iji tụlee ma nyochaa akụkọ ihe mere eme na echiche dịgasị iche iche.
Akwụkwọ ndị a nyere ebe dị egwu maka nyochaa nwoke na nwanyị na Mormonism, ma kwe ka mmepe nke echiche ndị dị ịrịba ama nye ndị inyom Mormon. Attorney Nadine Hansen, onye òtù Mormons maka ERA, bipụtara "Women and Priesthood" in Dialogue na 1981, nke welitere ajụjụ banyere ichi ụmụ nwanyị ụkọchukwu. Na 1984, Margaret Toscano, onye prọfesọ na Mahadum LDS nke Brigham Young University (BYU), nyefere ihe ngosi na Nzukọ Nzukọ Sunstone nke gosipụtara n'ihu ọha na Joseph Smith kwadoro ikike ụmụ nwanyị maka ịbụ ndị nchụaja. N'otu afọ ahụ, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme bụ Linda King Newell (b. 1941) na Valeen Tippetts Avery (1936-2006) bipụtara. Mormon Enigma, ihe omuma nke Emma Hale Smith nke tinyere ya na akuko ihe omuma ma kwurita banyere nleda anya nke omume Joseph nke otutu nwanyi. Isiokwu ndị a welitere ajụjụ gbasara nkuzi nke Mọmọn banyere nwoke na nwanyị, ndị isi LDS bidoro iji ịdọ aka na ntị ụka wee kọwaa mkparịta ụka ụmụ nwanyị banyere isiokwu ụfọdụ dị ka ịjụ okwukwe. Mgbe ntọhapụ nke Mormon Enigma, dịka ọmụmaatụ, ndị ndú ụka machibidoro Newell na Tippetts ikwu banyere "akụkụ ọ bụla nke okpukpe ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na Chọọchị LDS, nzukọ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ" (Newell and Tippetts 1994: xii).
E buliri mmachibido iwu ahụ na 1986 mgbe Newell na Tippetts rịọrọ Chọọchị LDS, mana mbọ ndị isi nchụ aja iji chịkwaa mkparịta ụka ọha na eze banyere Nne nke Eluigwe ma ọ bụ nkwupụta ụmụ nwanyị maka ịbụ ndị ụkọchukwu nọgidesiri ike na 1980s na 1990s. Mgbe otu nwata akwụkwọ kpere ekpere nye Nne nke Elu-igwe n’emume mmalite nke BYU na 1991, Onye-ozi Gordon B. Hinckley dọrọ ndị-ndu Nzukọ-nsọ ​​nke LDS aka na ntị ka ha lezie anya maka “ntakịrị mbibi nke ndapụ-n'ezi ofufe,” ịdọ aka na ntị nke o kwugharịrị mgbe e mechara na Nzukọ Ezumezu nke Nzukọ Otu Enyem-aka ( Ihe niile 2016: 202). Ụmụ nwanyị na ikike: Ịmalite ime Mormonism, nke Maxine Hanks dezigharịrị, bụ nke e bipụtara na 1992 ma tinye isi site n'aka prọfesọ na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na Margaret Toscano, ọkọ akụkọ ihe mere eme D. Michael Quinn, ọkà mmụta okpukpe Maxine Hanks, na ndị nwanyị ndị ọzọ Mormon na-ekwusi ike na ụmụ nwanyị LDS nwere ikike ịbụ ndị nchụaja na inyocha akụkọ Mormon na ozizi site n'aka nwanyị. echiche (Hanks 1992). Ụmụnna na Mmụọ, onye prọfesọ BYU, bụ Maureen Ursenbach Beecher dere na mbụ Ensign nchịkọta akụkọ Lavina Fielding Anderson, soro na 1992 (Beecher na Anderson 1992). Ọ gụnyere otu isi okwu nke Linda P. Wilcox na “The Mormon Concept of a Mother in Heaven,” tinyekwara otu isi nke Linda King Newell dekọtara ụmụ nwanyị ndị Mọmọn isonye na mmemme okpukpe nke edobere ugbu a maka ụmụ nwoke ndị ji ọkwa nchụ aja. N'otu afọ ahụ, Eugene England, onye guzobere Dialogue, tụlere Kọmitii Ndị Na-ewusi Ike na Chọọchị (SCMC) n'oge okpomọkụ Sunstone Symposium (Anderson 2003: 15). President Ezra Taft Benson (1899-1994) kere SCMC ntakịrị oge mgbe ọ malitere idu ndú na 1985 iji nyochaa feminists, ọganihu, agụmakwụkwọ, na ndị ọzọ nọ na-akpata nsogbu maka Chọọchị LDS, ma Chọọchị naanị kwetara na SCMC dị nke Sunstone.
Nke kachasị, na Septemba 1993 Chọọchị LDS dọrọ ndị isii aka, nke a kpọrọ "September isii" site n'aka ndị nta akụkọ. Mormon feminists bụ ndị mejupụtara ọnụ ọgụgụ nke ndị ezubere iche, na Lavina Fielding Anderson, Maxine Hanks, D. Michael Quinn, na Paul Toscano, di Margaret Toscano, ka a chụpụrụ. A chụrụ Lynne Kanavel Whitesides, onye nyeferela okwu ihu ọha banyere echiche nke otu Nne nọ n’eluigwe, ịdọ aka ná ntị nke na-akwụsị iwepụ ndị otu Nzukọ-nsọ ​​ma na-akagbu ikike ndị ọzọ. E yiri Margaret Toscano egwu na a ga-achụpụ ya n’afọ ahụ, ndị ndu ụka wee gwa ya ka ọ tụlekwama echiche nke nne nọ n’eluigwe ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-ejide ụkọchukwu, mana a chụpụghị ya rue 2000. Mgbasa mgbasa ozi mba kpuchiri omume ịdọ aka ná ntị, na ọ bụ ezie na ndị na-abụghị nke Chọọchị LDS na-akatọkarị ịchụpụ ndị nwanyị, n'ime Chọọchị omume ahụ nwere mmetụta dị egwu.
Otu ìgwè nke ụmụ nwanyị Mormon nwere emume 1,000 White Roses na Ọktoba nke 1993, bụ nke ha gụrụ nkwupụta na-ekwupụta Roses ihe nnọchianya nke nkwado nke Churchka na ndị na-adọ aka na ntị n'oge na-adịbeghị anya, ma gbaa ndị ụka LDS ume ka ha na ndị otu nwanyị nọ. Ka o sina dị, na 1995 Janice Merrell Allred (b. 1947), nwanne Margaret Toscano, bụ onye a chụpụrụ maka ide banyere mama nọ n'eluigwe, na na 1996 BYU osote prọfesọ Gail Turley Houston (b. 1950) ekweghị oge ya ma chụọ ya nke ọma, na akụkụ maka ihe odide ya na mama nke eluigwe, na akụkụ n'ihi na ọ rịọrọ onyinye sitere n'aka ndị ọrụ ibe ya iji nyere aka kwado emume 1,000 White Roses. Ndị Mormon nwanyị na ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi chere ihu na ịdọ aka ná ntị na 1990s, mana mgbe mmeghasị ihu ọha na nzukọ LDS Church na-emeso Septemba isii, a na-achụsasị omume ịdọ aka na ntị na-agafe oge ma na-adọta obere mgbasa ozi. Site na 1995, mgbe Chọọchị LDS bipụtara nkwupụta ya banyere ezinụlọ, ndị isi ụka akọwapụtara nke ọma mkparịta ụka ụmụ nwanyị banyere ụmụ nwanyị na-ejide ụkọchukwu ma ọ bụ nne nọ n'eluigwe dị ka nke nwere ike ịdị ize ndụ nye nguzo na ndị otu Chọọchị.
Iguzo nke ike n’etiti ndi ndu uka nke Mormon na ndi nwanyi n’agbanweghi agbanwe agbanwe n’afo 2000 dika ndi Mormons n’eji n’Intanet ekerita echiche na ozi, na inye ibe ha uche nke ime obodo na nkwado n’ime akwukwo Mormon, mgbe ufodu ana akpo Bloggernacle, mkpuru okwu. n’elu Mọmọn nke Mọmọn, nke di na Temple Square na Salt Lake City. Saịtị nke ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme Mormon mepụtara, ndị Mormon na ndị na-aga n’ihu, ndị Mọmọn na ụmụ nwanyị ndị ọzọ nwere daybọchị Ikpeazụ nyere ọhụụ, ohere, na mpaghara enweghị oghere iji chọpụta nsogbu. Ọtụtụ isiokwu nwere ike ịgbagha (dị ka iji Joseph Smith jiri oji nkume wee sụgharịa Akwụkwọ nke Mormon, akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ nke Mormon, omume Joseph Smith nke ịlụ karịa otu nwanyị, akụkọ ụmụ nwanyị banyere ndị ụkọchukwu, na ndị ọzọ) nwere ike ịdị mfe nyocha nke ọnụọgụgụ nke ndị Senti nke ụbọchị ikpeazu. Mormon feminists keere òkè dị mkpa na-agba mbuli elu Bloggernacle.
Lisa Butterworth kwalitere otu blog nwoke bụ Mormon Housewives na ndị enyi anọ na 2004. Ebe ahụ na-adọrọ uche na "Iwe iwe ọkụ na akwụkwọ ozi iji gbanwee" na posts nke blog na-etinye aka n'ịchọgharị ihe ndị Mọmọn sitere na nwanyị anya. Ndị ọzọ soro, gụnyere blog site na Exponent II na 2005, ụmụ nwanyị Zelophehad na 2006, na LDS WAVE (Womenmụ nwanyị na-arụ ọrụ maka olu na nha anya) Facebook peeji nke 2010. Na 2011, Young Mormon Feminists mepụtara otu Facebook mechiri emechi, nke na-enye ohere echedoro nke nwere ike itinye aka na esemokwu. mkparịta ụka, dịka ndị na-ede blọgụ na-ezere iji ezigbo aha ha na-ezere ịdọ aka ná ntị Churchka. Saịtị ndị a na mkparịta ụka ha kpalitere dugara ụzọ mbụ Mormon nwanyị na-eme ihe karịrị afọ iri, Wear Pants to Church Day na Disemba 16, 2012. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na Chọọchị LDS enweghị iwu iwu megide ụmụ nwanyị na-eyi uwe ogologo ọkpa chọọchị, omenala ndị Mormon na-akụda ya ike. Stephanie Lauritzen mere na 2012 blog post na-akpọ ụmụ nwanyị Mormon ka ha "kwụsị ịkụ egwu dị mma" ma tinye aka n'ụdị Mormon nke nnupụisi obodo, mgbe ahụ otu otu na-akpọ onwe ya All Enlisted kere ihe omume Facebook "Wear Pants to Church". Mgbe National Public Radio, ndị New York Times, na Huffington Post, na mgbasa ozi ndị ọzọ na-akọ banyere ihe ahụ mere na December 2012, ndị inyom Mormon bụ ndị ọzọ nọ na ntanetị.
Ọtụtụ saịtị ọhụrụ pụtara na nlele nke mba a. All Enlisted na-eme ka ndị inyom na-ekpe ekpere na Jenụwarị 2013 na-agba ndị òtù ume ka ha gwa ndị ndú Chọọchị LDS ka ha kwe ka ụmụ nwanyị na-ekpe ekpere na nnọkọ nkwurịta okwu Ọgbakọ, na March nke afọ ahụ, ndị ndú ụka kwupụtara na ha ga-ekwe ka ụmụ nwanyị na-ekpe ekpere na Nzukọ Ọgbakọ. Kate Kelly (bn 1980), ọkàiwu ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ, kwalitere Ordain Women (Ordain Women website nd), ebe nrụọrụ weebụ wepụtara maka ịhazi ụmụ nwanyị Mormon na ndị ụkọchukwu, na Machị 2013. Ebe ahụ gosipụtara profaịlụ 19 nke Mormons na nkwado nke nhọpụta ụmụ nwanyị, na Ordain Women nwere nzukọ izizi na ọnwa na-abịa. Kelly lekwasịrị ụmụ nwanyị anya na-akwalite ime ihe site na mmalite, na mgbe a gọnahụrụ tiketi iji gaa nnọkọ ndị isi nke LDS General Conference na Salt Lake City, ọ duru ụmụ nwanyị 250 jiri ejiji na-achọghị nchebe ịbanye. Bomụ nwoke ndị dị afọ iri na abụọ gafere ìgwè ahụ wee banye na nzukọ ahụ ka nwanyị ọ bụla ji nwayọ jụọ ndị nnọchianya maleka nwoke ma ọ bụrụ na ọ ga-abata ma ajụọ ya. [Foto dị n'aka nri] medialọ ọrụ mgbasa ozi nke mba na nke ụwa kpuchiri ihe ahụ, ma, mgbe a jụrụchara ya ụzọ yiri nke ahụ na nnọkọ ọkwa nchụ aja General Conference kwa afọ na Eprel 2014, Ordain Women gbara ụmụ nwanyị LDS ume ka ha chọọ ọnụ ụzọ ngosi mpaghara mpaghara nke General Nzukọ ndị nchụ-aja ọgbakọ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ha enweghị ike ịme ya, iji lelee nnọkọ ahụ n'ụlọ ma kesaa ahụmịhe na Twitter na Facebook, nke ụfọdụ ụmụ nwanyị Mormon na-eme ugbu a.
Na Disemba 2013, ndị isi ọgbakọ LDS dị na Kelly gwara ya ka ọ kwụsị mkpọsa ya maka ịchị ụmụ nwanyị. O meghị, na May 5, 2014 ndị isi tinye ya na oge ọhụụ. Na Mee 22, Ordain Women bidoro Mkparịta ụka isii, akwụkwọ elektrọnik edepụtara iji kwalite mkparịta ụka banyere ichi ụmụ nwanyị; ma a gwara Kelly site na akwụkwọ ozi June 8 na ọ chere ịdọ aka ná ntị maka ndapụ n'ezi ofufe. Ndị Mormon feminists gbakọtara n'ụlọ nzukọ ọgbakọ ha na kandụl na-enwu n'otu dị ka Kelly chere ihu na-anọghị na ya otu ndụmọdụ na June 22, ma gwa ya na a chụpụrụ ya n'echi ya (Wessinger 2014). E nyekwara ndị ọzọ ọzụzụ. Ọtụtụ Mormons ndị edepụtara profaịlụ ha na Ordain Women wepụrụ ihe ùgwù ha nke ụlọ nsọ ha, dịka onye guzobere Young Mormon Feminists bụ Hannah Wheelright, na nne na nna Kate Kelly. N'ime ọnwa ndị sochirinụ, ndị New York Times kọrọ banyere ndị Senti nke Ikpeazụ, ndị ụfọdụ n'ime ha kwuru okwu ntanetị, ndị ndị isi ọgbakọ nke LDS kpọrọ ha ma dọọ aka ná ntị na ha nwere ike ịdọ ha aka ná ntị ma ọ bụrụ na ha akwụsịghị ikwu ihe ndị ha chere na ha ekweghị ozizi Church (Goodstein 2014).
N'agbanyeghị omume ịdọ aka ná ntị na iyi egwu, nyiwe nke usoro mgbasa ozi ọhụụ mere ka ọ ghara ikwe omume nye ndị ndu Mormon igbochi esemokwu, echiche, na ozi metụtara isiokwu LDS Church dị nro. Ebe nrụọrụ ọhụrụ na-aga n'ihu na-apụta, saịtị ndị dị adị na-agbasa. Dị ka ihe atụ, damụ nwanyị Na-ahụ Maka Iwu, dịka ọmụmaatụ, na-akwado ihe karịrị profaịlụ 600 nke ndị na-akwado nkwado ụmụ nwanyị. Saịtị nke ndi nwanyi Mormon kere tinye aka na echiche na ọdịnaya nke saịtị ndi ozo, karia ndi elebara anya na Mormon Mormon, nkowa nke omuma nke akwukwo, na nkwenye LGBT-Mormon. [Foto dị n'aka nri] Ọdịnaya na mkparịta ụka dị n'etiti na n'etiti saịtị ndị a na-arịwanye elu, ndị Mormon feminists na-esite n'ọrụ sitere na isi mmalite akwụkwọ akụkọ ihe mere eme adịghị tupu akwụkwọ ntanetị. N'otu oge ahụ, arụmụka banyere okike na-ebulite na saịtị ndị gbadoro ụkwụ na nkuzi, akụkọ ntolite, ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ nke LDS. Emeela ọtụtụ saịtị iji kwado ọnọdụ ndị Mọmọn na-achọghị mgbanwe, gụnyere ụfọdụ saịtị ndị ewu ewu enyere ụmụ nwanyị. Womenmụ nwanyị Mormon guzoro (Mormon Women Stand web nd), dịka ọmụmaatụ, na-akwado ma na-ekwusi ike nkwupụta nke Chọọchị LDS na ezinụlọ, yana nkọwa nke okike na mmekọahụ enyere n'ime ya, ma nwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 45,000 Facebook nwere mmasị, ma e jiri ya tụnyere Ordain Women, with ihe karịrị 7,200.
Ndị ndu ụka LDS malitere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na nzaghachi maka mmụba nke Bloggernacle, ebe ọtụtụ saịtị pụtara na-elekwasị anya ọ bụghị naanị na okike, mana na akụkọ ntolite nke Chọọchị, omume Joseph Smith nke ịlụ karịa otu nwanyị, na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ dị nro. Chọọchị LDS na-agba mbọ ịnye isi ihe, edemede, na ọdịnaya ndị ọzọ iji gbochie akụkọ gbasara nyocha akụkọ ihe mere eme nke ụka na nkuzi na-abawanye na ịntanetị. Na 2008, e hiwere ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme nke ụka na-ebipụta akwụkwọ metụtara mmalite na uto nke Mormonism, n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a malitere ibipụta akwụkwọ ntanetị nke isi ihe ndị bụ isi nke Joseph Smith na ndị Mormons mbụ dere nke a na-ahapụbeghị. N'agbanyeghị nke ahụ, na ajụjụ banyere akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị LDS, na esemokwu gbara gburugburu mmeghachi omume nke Chọọchị na ndị Mormon feminists na mmegide alụmdi na nwunye na-emegide nwoke na nwanyị, Ndị Nsọ nke terbọchị Ikpeazụ hapụrụ Chọọchị na ọnụ ọgụgụ dị elu. Site na 2011, Ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye na-edekọ akụkọ Marlin K. Jensen kwetara na obere klas nke ụmụ akwụkwọ Utah State University na ndị isi Chọọchị LDS "maara" na ndị otu na-ahapụ Chọọchị "n'ìgwè" ka increasedntanetị mụbara ozi nke na-abụghị idebe ihe jikọrọ nkuzi nke Church. (Ihe ndekọ ederede nke okwu ya, nke o doro anya na ọ maghị ya, edepụtara na ntanetị mana emesịrị wepụ ya.) Jensen gosipụtara na ndị isi ụka LDS amalitela atụmatụ ọhụrụ, The Rescue, iji kwụsị ọnwụ nke ndị otu, nke akụkụ ya gụnyere ihe ọhụrụ ngwugwu nke ihe eji akuziri ndi otu ihe banyere ihe ndi a na-agbaghari anya nke nkuzi uka na akuko. Site na 2013, Chọọchị LDS ebipụtakwala edemede iri na atọ na-enweghị aha na isiokwu ndị na-ese okwu na ibe ya. Ndi Onye-isi-nduzi Mbụ wee kwado ya, usoro a gụnyere edemede banyere “Nne n’ime elu-igwe” na “nkuzi nke Joseph Smith gbasara Ọkwa Nchụ-aja, Templelọ Nsọ, na Womenmụ nwanyị” (Mormon Essays).
Ntaneti intaneti ka bu nchikota ndi mmadu maka ndi nwanyi na ndi nwoke n’akuku nile nke uka n’ uka nke Jisos Kraist nke ndi kwenye ikpeazu. Ndị ndu ụka emeela ụfọdụ ohere nye ụmụ nwanyị: na mgbakwunye na ikwe ka ụmụ nwanyị na-ekpe ekpere na nnọkọ General Conference, na 2012 ndị isi ụka wedara afọ nke ụmụ nwanyị LDS nwere ike ịmalite ọrụ, site na iri abụọ na otu ruo iri na itoolu; Ndi-isi-nduzi nke Nzukọ-nsọ ​​nile nke Otu Enyem-aka, Ndi Nwanyị, na Praịmarị nọdụrụ ugbua n’azụ ndị isi ụmụ nwoke na dais na Nzukọ Ọgbakọ General; na, bido n’Ọgọst 2015, a na-ahapụ ndị ndu ndị otu Enyem aka ka ha jee ozi na kọmitii ọchịchị nke Nzukọ-nsọ. N'otu oge ahụ, ndị isi ụka LDS na-aga n'ihu ịdọ aka ná ntị banyere ihe egwu dị na ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnwa Febụwarị 2016, Onye ozi M. Russell Ballard (b. 1928) webatara atụmatụ Churchka ọhụrụ akpọrọ Doctrinal Mastery nye ndị otu na-akụzi na Sistemụ Agụmakwụkwọ (ka (CES). O kwuru na “ọ bụ naanị otu ọgbọ gara aga. . . ohere ụmụntakịrị anyị inweta banyere akụkọ ihe mere eme anyị, ozizi anyị, na omume anyị bụ naanị n'ihi ihe ndị materialka bipụtara, "ọ gwara ndị nkuzi nke ụka ka ha" chetara [ụmụ akwụkwọ] na John asịghị, 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu enweghị amamihe, ka ya Google! '”ma gbaa ndị nkụzi ụka ume ka ha gwa ndị ntorobịa ka ha kpee ekpere kama ịchọ azịza na ịntanetị (Ballard 2016).
N'oge ederede a, Chọọchị LDS na-aga n'ihu na-eme mgbanwe ụfọdụ mgbe ọ na-eguzogide mgbanwe ndị ọzọ dị mkpa, dịka nhazi ụmụ nwanyị. Kate Kelly gbadara na Ordain Women's Executive board na July 2015, mana ụmụ nwanyị Ordain gara n'ihu na-akwalite ọrụ ozugbo. Tupu nnọkọ General Conference nke Eprel 2016, Ordain Women na-akwado ya nwara iwepụta kaadị na akwụkwọ ozi nye ndị isi n'isi ụlọ ọrụ LDS Church na-arịọ ka ụmụ nwanyị kwe ka ha mee ihe (dịka ije ozi dị ka ndị akaebe gọọmentị nke emume ndị ụkọchukwu ma nọrọ maka ndị isi nchụ-aja. Ajụjụ ọnụ '' nke onwe '' banyere ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị Mọmọn) ihe ndị anaghị achọ ka ụmụ nwanyị chie ha echichi. The otu e kweghị ịnapụta ndetu, ma naanị ọnwa ole na ole mgbe e mesịrị, na June 2016, na Ensign gosipụtara isiokwu na-akọ banyere otu ebe na nwunye Spencer W. Kimball, Camilla, guzoro dị ka onye akaebe gọọmentị maka baptism. Mormons ka a na-akuzi ikwere na mkpughe na-aga n’ihu, ikwere na Ndi-isi nduzi ha bukwa ndi Amụma ndị nwere ike ịnata ntụzi-aka ọhụrụ na nduzi-nsọ. Ndị nwanyị na-aga n’ihu n’olileanya na mkpughe na-aga n’ihu nwere ike ịhapụ Churchka nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ terbọchị Ikpeazụ a ka ọ gbanwee, bụrụ nke gụnyere mmadụ niile, ma nye ụmụ nwanyị Mọmọn ohere nha anya dịka nke ụmụ nwanyị nwere na Nzukọ-nsọ ​​mbu.
Image 1: Sonia Johnson na-eduga ya site na ndị uweojii mgbe ejidere ya maka ịchọta onwe ya n'ọnụ ụzọ ámá nke Seattle LDS, Washington.
Image 2: Ndị na-ahụ maka ndị inyom nke ụbọchị ụka na-anọgide na-eme ememe Wear Pants na Day Church kwa afọ, ka ụmụ nwanyị na-eyi uwe egwu na ndị ikom na-eyi uwe na-acha odo odo iji gosipụta nkwado ha.
Image 3: Kate Kelly na ndị inyom Mormon na-ele anya ka ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-abanye na nnọkọ ndị ụkọchukwu n'ozuzu nke LDS n'ọnwa Ọktoba nke 2013.
Foto 4: Ụmụazụ Ordain Women bipụtara ihe oyiyi, dịka nke dị n'elu, na-akọwa ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ememe okpukpe nke ndị inyom Mormon oge mbụ na-ekere òkè, ma nke a na-egbochi ndị nwoke na-ahụ maka ndị nchụàjà.
Allred, Janice Merrill. 2016. "Ihe odide si na 'Toward a Mormon Theology of God the Mother' (1994)." Pp. 196-204 na Mmekọrịta Mormon: Akwụkwọ dị mkpa, nke Joanna Brooks dere, Rachel Hunt Steenblik, na Hannah Wheelright. New York: Oxford University Press.
Anderson, Lavina Fielding. 2003. "Chọọchị na Ndị Ọkà Mmụta Ya: Afọ Iri Na-eso." Magazin Sunstone, July 14. Pp. 13-19. Nweta site na https://www.sunstonemagazine.com/pdf/128-13-23.pdf na 1 December 2016.
Ballard, M. Russell. 2016. "Ohere na ibu ọrụ nke ndị nkuzi CES na 21st Century." Adresara ndị nkụzi CES, 26 February, Ụlọ Nzukọ Salt Lake. Nzuk ™ nke Jisus Kra∫st nke Ndi-ns ™ nke Ikpeaz ™. Nweta site na https://www.lds.org/broadcasts/article/evening-with-a-general-authority/2016/02/the-opportunities-and-responsibilities-of-ces-teachers-in-the-21st-century?lang=eng na 2 December 2016.
Beecher, Maureen Ursenbach. 2000. The Personal Odide nke Eliza Roxcy Snow. Salt Lake City: Mahadum nke Utah Press.
Beecher, Maureen Ursenbach na Lavina Fielding Anderson, eds. 1992. Ụmụnna nwanyị na Mmụọ: Ụmụ nwanyị Mọmọn na akụkọ ọdịnala na ọdịbendị. Urbana na Chicago: Mahadum nke Illinois Press.
Bradley, Martha Sonntag. 2005. Pedestals na Podiums: Ụmụ nwanyị Utah, Òtù Okpukpe, na Ikike Nha. Salt Lake City: Akwụkwọ Mbinye aka.
Brooks, Joanna, Rachel Hunt Steenblik, na Hannah Wheelwright, eds. 2016. Mmekọrịta Mormon: Akwụkwọ dị mkpa. New York: Oxford University Press.
Bushman, Richard L. 2005. Joseph Smith: ike ike Stone Rolling. New York: Alfred A. Knopf.
Nzukọ nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ Latbọchị Ikpeazụ a. nd “Nkuzi Joseph Smith banyere Ọkwa nchụ-aja, Templelọ Nsọ na ,mụ nwanyị.” Nweta site na https://www.lds.org/topics/joseph-smiths-teachings-about-priesthood-temple-and-women?lang=eng#2 na 24 October 2016.
Compton, Todd M. 1997. Na Sacred Owu: The otutu nwunye nke Joseph Smith. Salt Lake City: Akwụkwọ Mbinye aka.
Derr, Jill Mulvay. 1978. "Ọnọdụ nwanyị na ụwa Brigham Young." BYU Studies 18: 377-95. Nweta site na https://journals.lib.byu.edu/spc/index.php/BYUStudies/article/view/502 na 1 December 2016.
"Nkwurịta okwu, 7 April 1844, dịka William Clayton kọrọ." Akwụkwọ akụkọ Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/discourse-7-april-1844-as-reported-by-william-clayton/2 na 2 December 2016
Evans, David W. 1869. "Irubere Oziọma ahụ-Ntụrụndụ-Ọganihu Onye Ọhụụ: Nkwupụta nke Onye Nkụzi Brigham Young." Journal of Ekwesị 13: 56-62. Nweta site na http://jod.mrm.org/13/56 na 2 December 2016.
Finnigan, Jessica, na Nancy Ross. 2013. "'Abụ m onye Mormon Feminist': Olee otú Social Media Gbanwee ma gbasaa a Movement." Akwụkwọ ntughari nke nyocha gbasara okpukpe 9: edemede 12. Nweta site na http://www.religjournal.com/ na 2 December 2016.
Ndi isi nduzi na ndi isi nke ndi ozi iri na ato nke Nzukọ nke Jisus Kraist nke ndi nsọ nke ụbọchị ikpe-azu. 1995. "Ezinụlọ: Akwụkwọ Nsọ nke Ụwa," September 23. Nzuk ™ nke Jisus Kra∫st nke Ndi-ns ™ nke Ikpeaz ™. Nweta site na https://www.lds.org/topics/family-proclamation?lang=eng na 2 December 2016.
Goodstein, Laurie. 2014. "Ndị Mormons Na-ekwu Mkparị Online Bịa Ibu Egwu Site na Chọọchị."The New York Times, June 18. Nweta site na www.nytimes.com/2014/06/19/us/critical-online-comments-put-church-status-at-risk-mormons-say.html?_r=0 na 1 December 2016.
Hanks, Maxine, ed. 1992. Ụmụ nwanyị na ikike: Ịmalite ime Mormonism. Salt Lake City: Akwụkwọ Mbinye aka.
"History, banyere Summer 1832," p. 3. Akwụkwọ nke Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paperSummary/history-circa-summer-1832?p=1#!/paperSummary/history-circa-summer-1832 na 2 December 2016.
"Akụkọ ihe mere eme, 1838-1856, Mpịakọta A-1 [23 December 1805-30 August 1834]." P. 3. Akwụkwọ nke Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1 na 2 December 2016.
"Nkeji, gburugburu 3-4 June 1831," p. 3, akwụkwọ Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paperSummary/minutes-circa-3-4-june-1831?p=1&highlight=priesthood na 2 December 2016.
"Mormon edemede." nd Nweta site na http://mormonessays.com/ na 1 December 2016.
Ndi Mormon Mormon kwadoro ebe nrụọrụ weebụ. nweta nnweta site na http://www.mormonwomenstand.com na 1 December 2016.
Newell, Linda King. 1981. "Onyinye E Nyere, Onyinye E Ji Were: Ịsacha, Na-ete Ọcha, Na Ịgọzi Onye Ọrịa n'etiti Ndị Mụrụ Nwoke Mormon." Sunstone September-October: 6-25. Nweta site na https://www.sunstonemagazine.com/pdf/029-16-25.pdf na 1 December 2016.
Newell, Linda King na Valeen Tippetts Avery. 1994. "Okwu mmalite nke mbipụta nke abụọ." Pp. xi-xvii na Mormon Enigma: Emma Hale Smith, Nke abụọ Edition. Urbana na Chicago: Mahadum nke Illinois Press.
"Akwụkwọ nke Akwụkwọ Mmasị nke Relief Society na Nauvoo." Nd Akwụkwọ nke Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/nauvoo-relief-society-minute-book&p=37/1 na 1 September 2016.
Ulo oru umuaka umunwanyi. nweta nnweta site na http://ordainwomen.org/ na 1 December 2016.
Packer, Boyd K. 1993. "Gwa Kọmitii Na-ahụ Maka Chọọchị Nile." Zayọn kacha mma, May 18. Nweta site na http://www.zionsbest.com/face.html na 2 December 2016.
Ọrụ Mgbasa Ozi Ọha. 2006. "Interview: Margaret Toscano." Ahụmahụ American / Frontline: The Mormons, January 27. Nweta site na http://www.pbs.org/mormons/interviews/toscano.html na 2 December 2016.
Pratt, Orson, na Joseph F. Smith. 1878. "Akuko nke ndi okenye Orson Pratt na Joseph F. Smith." Ndi Sainbọchị Nsọ nke nialbọchị Ikpeazụ nke Ndị Ikpeazụ, Disemba 16: 785-89. Nweta site na http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/ref/collection/MStar/id/27192 na 2 December 2016.
"Mkpughe, 22-23 Septemba 1832 [O&C 84]." Akwụkwọ Joseph Smith. Nweta site na http://www.josephsmithpapers.org/paperSummary/?target=x1542#!/paperSummary/revelation-22-23-september-1832-dc-84 na 2 December 2016.
Stack, Peggy Fletcher, na Mary Paulson Harrington. 1992. "Chọọchị Mormon kwuru na ọ ga-edebe akwụkwọ na ndị na-eso ụzọ." Ozi Okpukpe, August 15. Nweta site na https://news.google.com/newspapers?id=JTIaAAAAIBAJ&sjid=zCQEAAAAIBAJ&dq=strengthening-church-members-committee&pg=6301,4077100&hl=en na 2 December 2016.
Toscano, Margaret M. 2015. "The Mormon 'Ordain Women' Movement: Omume ọma nke Virtual Activism." Pp. 153-66 na Nwanyi na Okpukpe na 21st Century: Technology, Dialogue, na Ịbawanye Ókè, nke Gina Messina-Dysert dere na Rosemary Radford Ruether. New York: Routledge.
Wessinger, Catherine. 2014. "Na-achọ ịha nhatanha na Chọọchị LDS: Ọrụ maka Iwu formụ nwanyị." Ajụjụ ọnụ nke Kate Kelly. Nweta site na http://wrldrels.org/SpecialProjects/WomenInTheWorld'sReligionsAndSpirituality/Interviews.htm na 1 Disemba 2016.
Ọhịa, Cadence. 2014. "Ọgwụgwụ nke 'oge Mormon.'" New York Times, July 14. Nweta site na http://www.nytimes.com/2014/07/15/opinion/the-end-of-the-mormon-moment.html?_r=0 na 1 December 2016.
"Okpomoku di na America"
(N'ajụjụ ọnụ Dr Jefferson F. Calico)
(Ajụjụ ọnụ Dr Kaarina Aitamurto)